Debian: izvi ndizvo zvakave zvichitaurwa pamusoro pevhiki rino | Linux Vakapindwa muropa
Debian: izvi ndizvo zvakave zvichitaurwa pamusoro pevhiki ino
Muvhiki yapfuura uye nemazuva ari kushanda vhiki ino, Vagadziri veDebian vakaburitsa dzimwe dzakanaka nyaya zvine chekuita nekuparadzirwa sezvo ivo vakagovana ruzivo nezve iro basa rine chekuita neshanduro 11 (kuyedza) pamwe neshanduro 8.
Yenyaya idzi chinhu chinonyanya kushamisa chiziviso cherutsigiro rwakawedzerwa unopa chiiaa kune Debian vhezheni 8 "Jessie" iyo ichaenderera ichiwana rutsigiro kwemamwe makore mashanu, zvakare inoratidzira kutonhora kwechirongwa chekuyedza cheDebian 5 "Bullseye" icho chakarongerwa gore rinouya uye nedzimwe nhau.
1 Debian 8 "Jessie" ichave iine mamwe makore mashanu ekutsigirwa
2 Debian 11's chikamu chekumisikidza chikamu chichava mune mwaka wegore rinouya
3 Debian 11 Installer Yechipiri Alpha Kuburitswa
Debian 8 "Jessie" ichave iine mamwe makore mashanu ekutsigirwa
Chikwata cheLTS chine basa rekugadzira zvinyorwa zveDebian LTS zvinoburitsa zvakaburitsa nhau kuti Debian 8 ichaenderera ichitambira zvigadziriso mushure mekupedza iyo kutenderera kugara makore mashanu ekugadzirisa.
Pakutanga, zvainge zvakarongerwa kumira kutsigira bazi Debian 8 LTS muna Chikunguru 2020, asi Freexian (kambani yebasa inozivikanwa mune yemahara software) vakaratidza kuda kuburitsa zvidzo zvavo vega pamwe nekubviswa kwekushomeka kwepakeji sechikamu chechirongwa chakawedzerwa "Yakawedzerwa LTS".
Rutsigiro rwekuwedzera ruchazadza mashoma mapakeji uye anongoshanda kune amd64 uye i386 (pamwe ruoko rwekuvaka).
Tsigiro haizofukidza mapakeji senge Linux 3.16 kernel (Debian 4.9 "Tambanudza" yakatsigirwa kernel 9 ichapihwa), openjdk-7 (openjdk-8 ichapihwa) uye tomcat7 (yekuchengetedza ichagara kusvika Kurume 2021).
Zvidzoreso zvichagoverwa kuburikidza neyekunze nzvimbo inochengetwa naFreexian. Kuwana kunenge kuri kwemahara kune vese vanofarira, uye huwandu hwemapakeji anotambirwa anoenderana nenhamba yakazara yevanotsigira uye mapakeji anovanakidza.
Debian 11's chikamu chekumisikidza chikamu chichava mune mwaka wegore rinouya
Chimwe chidimbu chemashoko chakaburitswa nevagadziri veDebian ndeche kuburitswa kwechirongwa chekumisikidza iyo Debian 11 ″ Bullseye kuburitsa base » iyo inotarisirwa kuvhurwa pakati-2021.
Mukati mechirongwa zvinofungidzirwa izvo Kubva muna Ndira 12, 2021, nhanho yekutanga yekugwamba chando chepakeji ichatanga, mukati mayo shanduko dzinomira (kuvandudza mapakeji anoda kugadziriswa kwemamwe mapakeji, ayo achabvisa mapakeji kubva mukuyedzwa), uye zvakare anomisa kukwidziridza mapakeji anodiwa kuungano (kuvaka zvakakosha).
Musi waFebruary 12, 2021, "Soft Freeze" ichaitika de hwaro hwepakeji, mariri kugamuchirwa kwemapaketi matsva kuchamira sosi uye kugona kugonesa zvakare zvakabviswa mapakeji zvichavharwa.
Musi waMarch 12, 2021, ichashanda chando «Full Freeze » isati yatanga, mairi maitiro ekuchinjisa makiyi mapakeji uye mapakeji pasina otomatiki kuyedzwa kusagadzikana-chiratidzo inomira zvachose uye nhanho yekuyedzwa zvakanyanya uye kugadzirisa kwematambudziko anovharira kutanga kuchatanga.
Debian 11 Installer Yechipiri Alpha Kuburitswa
Chekupedzisira, imwe yenhau dzakaburitswa ndeye kuratidzwa kwechipiri alpha vhezheni yeiyo inosimudza yeinotevera kuburitswa kukuru kwaDebian, "Bullseye".
Mukati meiyo kiyi shanduko mune inoisa Inofananidzwa neyekutanga alpha vhezheni, ndeaya:
Kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.4
Yakagadziridzwa matemplate emashoko anovharira nezve kuisa iyo system wachi
Pkgsel inowedzera kuongorora kwe taskel kuisirwazvisinei nekukosha kwayo.
Iyo debconf template yakawedzerwa, ichikubvumidza iwe kupfuudza zvachose iro taskel uchichengetedza kuwana kune mamwe mabasa epgselsel.
Kana yaiswa ine yerima dhizaini theme, kuiswa kweakawedzera musiyano modhi inovimbiswa.
Wakawedzera rutsigiro rwe compiz ezoom.
Multiple koni yekushandisa yagadziriswa: kana yakasarudzika sarudzo iriko, pachinzvimbo chekutanga akawanda maconsoles mune yakafanana, chete yekutanga kukosheswa koni inotangwa.
Mune systemd, udev-udeb inoshandisa iyo 73-usb-net-by-mac.link faira.
Input, kvm, uye render zvinowedzerwa kune iyo runyorwa rwemazita emashandisirwo akachengetedzwa (udev.postinst inowedzera ivo semapoka esistimu).
Wakawedzera rutsigiro rweLibrem 5 uye OLPC XO-1.75 zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Debian: izvi ndizvo zvakave zvichitaurwa pamusoro pevhiki ino
Fedora 32 beta inosvika neGnome 3.36, Kernel 5.6, Earlyoom nezvimwe